Haween tababar loogu soo xiray Muqdisho – Radio Muqdisho
Ku dhawaad 30 haweeen ah oo laga kala keenay degmooyinka Gobolka Benaadir ayaa manta tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho, kaasi oo ku saabsanaa sare u qaadidda heerkooda aqooneed.
Tababarkan oo socday muddo lix bil ah, isla markaana ay soo qaban qaabisay hay’adda SOWDA oo ah hay’ad u dhaq dhaqaaqda arrimaha haweenka, loona qabtay ku dhawaad 30 haween ah oo laga kala keenay degmooyinka Gobolka Benaadir ayaa waxaa lagu barayay maamulka iyo maareynta xafiisyada, ganacsiga iyo xirfado yar yar oo ay ku shaqeysan karaan, waxaana xiritaankii tababarkaasi ka qeyb galay ururada haweenka ee Qaranka iyo kan gobolka, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay.
Faadumo Cabdullaahi Macalin oo ah guddoomiyaha hay’adda SOWDA ayaa sheegtay in tabaarka ay ka faa’iideysteen haween laga soo xulay degmooyinka Gobolka Benaadir, waxaana ay ku boorisay inay bulshada ugu adeegaan waxyaabaha ay tababarku ku qaateen.
Qaar ka mid ah haweenkii tababarka loo soo xiray oo ka hadlay dareenkooda ayaa soo dhaweeyay tababarka loo qabtay.
Canab Xasan Cilmi Guddoomiye ku-xigeenka ururka Haweenka Qaranka iyo Jawaahir Baarqab Guddoomiyaha ururka haweenka Gobolka Benaadir ayaa si isku mid ah dar daaran u jeediyay ardaydii tababarka nasiibka u heshay.
Jamiilo Saciid Muuse oo ku hadlaysay magaca haweenka qurbo joogta ah, isla markaana xilal kala duwan ka soo qabatay dowladihii dalka soo maray ayaa tilmaamtay in aad ugu faraxsantahay in haween intan la eg loo qabto tababar lagu kobcinayo aqoontooda.
Guddoomiyaha ururka Haweenka Qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo soo xirtay tababarka ayaa xustay in ururka Haweenka Qaranka uu dhiiri gelinayo ardayda tababarka dhamaysatay, isla markaana ay gacan ka geystan doonaan sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa.
Gudoomiyaha G/Sh/dhexe oo ka hadlay waxqabadka maamulkiisa (Dhageyso+Sawirro)
Xuska dhalashada Nabigeena Muxamad (NNKH) oo lagu qabtay Mareykanka "Sawirro+Dhageyso"